ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုများဖြင့် နာမည်ကြီးသော စိုးလျှပ်စစ် ဥက္ကဌ ဦးစိုးတင့် ကွယ်လွန် - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုများဖြင့် နာမည်ကြီးသော စိုးလျှပ်စစ် ဥက္ကဌ ဦးစိုးတင့် ကွယ်လွန်
ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုများဖြင့် နာမည်ကြီးသော စိုးလျှပ်စစ် ဥက္ကဌ ဦးစိုးတင့် ကွယ်လွန်
Apann Pyay 1:25 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ပျဉ်းမနားမြို့မှ စိုးလျှပ်စစ်ဥက္ကဌ ဦးစိုးတင့် ကွယ်လွန်သွားပြီဟု အွန်လိုင်းသတင်းများတွင် အခိုင်အမာရေးသားကြသည်။ သူသည် ဆင်းရဲမွဲတေသူများကို ရက်ရက်ရောရော ပေးကမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး။ တစ်နိုင်ငံလုံး လူသိများသူလည်းဖြစ်သည်။ သောက်သုံးရေမရှိသော ကျေးလက်ရွာများတွင်း စက်ရေတွင်းများ တူလှူခဲ့သည်။ ပျဉ်းမနားတစ်မြို့နယ်လုံးနှင့် အခြားနေရာများတွင်ပါ လိုအပ်သည်များကို သိန်းထောင်၊ သောင်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျခံလှူဒါန်းခဲ့သည်။ စာသင်ကျောင်းဆောင်ကြီးများ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
Facebook သုံးစွဲသူများစွာကလည်း ကောင်းရာသုဂတိ ရောက်ရှိပါစေ စသည်ဖြင့် ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးကြသည်။
ဦးဗိတ် အကောင့်ပိုင်ရှင် Facebook သုံးစွဲသူတစ်ဦးက
”ပျဉ်းမနားတစ်​မြို့လုံး သာဓု​ခေါ်သံ​တွေဖုံးလွှမ်း​လောက်​​အောင်​. . .
သြချရ​လောက်​​အောင်​…. လှူနိုင်​တဲ့ 
ဥက္ကဌကြီး ဦးစိုးတင့်​ (စိုးလျှပ်​စစ်​)
ယနေ့ 16.7.2017 နံနက်(၁၀:၁၀)နာရီအချိန်က
ကွယ်​လွန်​သွားပြီ ပျဉ်းမနားဝန်းကျင်က လက်လုပ်လက်စား
လူတန်းစားများအတွက် ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုပါ ”
ဟု ရေးသား ထားသည်။
ပဉျြးမနားမွို့မှ စိုးလြှပျစဈဥက်ကဌ ဦးစိုးတငျ့ ကှယျလှနျသှားပွီဟု အှနျလိုငျးသတငျးမြားတှငျ အခိုငျအမာရေးသားကွသညျ။ သူသညျ ဆငျးရဲမှဲတသေူမြားကို ရကျရကျရောရော ပေးကမျးမှုမြား ပွုလုပျခဲ့ပွီး။ တဈနိုငျငံလုံး လူသိမြားသူလညျးဖွဈသညျ။ သောကျသုံးရမေရှိသော ကြေးလကျရှာမြားတှငျး စကျရတှေငျးမြား တူလှူခဲ့သညျ။ ပဉျြးမနားတဈမွို့နယျလုံးနှငျ့ အခွားနရောမြားတှငျပါ လိုအပျသညျမြားကို သိနျးထောငျ၊ သောငျးပေါငျးမြားစှာ ကုနျကခြံလှူဒါနျးခဲ့သညျ။ စာသငျကြောငျးဆောငျကွီးမြား ဆောကျလုပျလှူဒါနျးခဲ့သညျ။
Facebook သုံးစှဲသူမြားစှာကလညျး ကောငျးရာသုဂတိ ရောကျရှိပါစေ စသညျဖွငျ့ ဆုတောငျးမှုမြား ပွုလုပျပေးကွသညျ။
ဦးဗိတျ အကောငျ့ပိုငျရှငျ Facebook သုံးစှဲသူတဈဦးက
”ပဉျြးမနားတဈမွို့လုံး သာဓုချေါသံတှဖေုံးလှမျးလောကျအောငျ. . .
ဥက်ကဌကွီး ဦးစိုးတငျ့ (စိုးလြှပျစဈ)
ယနေ့ 16.7.2017 နံနကျ(၁၀:၁၀)နာရီအခြိနျက
ကှယျလှနျသှားပွီ ပဉျြးမနားဝနျးကငျြက လကျလုပျလကျစား
လူတနျးစားမြားအတှကျ ကွီးမားသောဆုံးရှုံးမှုပါ ”
ဟု ရေးသား ထားသညျ။